नेपालमा हनिमून पीरियड पत्रकारिता र यसको असर कुनै समय थियो पत्रकारिता गरेर पनि खान पुग्छ र भन्ने ? पछिल्लो पाँच वर्षयताको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा मौलाउँदो अनलाईन पत्रकारिताका कारण पत्रकारहरुको सेवा सुविधा आकाशिएको छ । असार ११, २०७६
नेपालको वायु प्रदूषणको कारण भारत जेठ २३, २०७६
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एक एक रुख हिसाब गरेर काटिएको हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कुनै हचुवाका भरमा काटिएको छैन । नेपालको इतिहासमा प्रत्येक रुखको हिसाब राखेर गरेको काम भनेकै यही हो । त्यसैले यसलाई के भनिएको छ भने वनको सुशासनको कडी भनेकै यही हो । गुड गभर्नेन्स । फाल्गुन १८, २०७५
२००७ सालको क्रान्ति नै आधुनिक नेपालको जग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक तथा यस आन्दोलनका लोकप्रिय नेता पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपाली जनआन्दोलनः एक समीक्षा’ मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतीय भूमिकाको वस्तुवादी विश्लेषण गरेका छन्। उनको भनाइ यो रहेको छ कि २००७ सालका उपलब्धि राजाले अपहरण गर्ने कुराको वीजारोपण दिल्ली सम्झौतामा नै भएको थियो। दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने पुष्पलालको प्रष्ट विचार रहँदै आएको हो। फाल्गुन ७, २०७५
सरकारको एक वर्ष पूरा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको सरकारको दाबी छ । नेपालमा रेल र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीयछलफल भएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकाले सकारात्मक परिणाम देखिँदै जाने सरकारको अपेक्षा छ । चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न भएको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । फाल्गुन ३, २०७५
स्वदेशमै यूवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेदेखि पानीजहाज कार्यालय सम्म गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनासँग यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनालाई तुलना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको तथा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । यही अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको उनको दाबी छ । फाल्गुन २, २०७५
आशाभन्दा आलोचनाबढी, उपलब्धी कम सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरेको छ । त्यस्तै, छोराछोरीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट सीधै बाबु–आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसदमा पेस भएको छ । फाल्गुन १, २०७५
‘सिमसार र जलवायु परिवर्तन’ जलवायु परिवर्तनका कारण सीमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ । त्यसैले यसपालीको नारा नै सीमसार र जलवायु परिवर्तन राखिएको छ । विश्वमा १९८५ देखि सीमसार दिवस मनाइए पनि नेपालमा भने सन् १९९७ बाट सीमसार दिवस मनाउन थालिएको हो । माघ १९, २०७५
किन नदीको संरक्षणमा उदासिन बन्दैछ सरकार ? नेपालका प्रमुख नदी जलाधारमा उपलब्ध जलविद्युतको सम्भाव्य क्षमता ८३२८० मेगावाट रहेको छ । आर्थिक र प्राविधिकरूपले तत्कालै विकास गर्न सकिने ४२ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशत आन्तरिक माग आपूर्ति बाहेक अतिरिक्त विद्युत् ऊर्जा भारतलगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशमा पनि भारतको एकीकृत विद्युत् प्रणालीमार्फत निर्यात गर्न सकिन्छ । माघ ११, २०७५
सम्भावित भीमकाय पहिरोमै विकासे गतिविधि ! माघ १०, २०७५
तराई मधेशलाई मरुभूमि बन्नबाट जोगाऔं राष्ट्रिय राजमार्ग, नदी किनार र पक्की पुलबाट ५ सय मिटर दुरीसम्म क्रसर उद्योग खोल्न निषेध छ । त्यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष तथा घना बस्तीबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन प्रस्तावमा भने ‘जुनसुकै ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी’ मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको छ । माघ ८, २०७५
विपत्ति निम्त्याउँदै राम्चेको पहिरो मानव बस्ती जोखिममा पर्नुको कारण अव्यवस्थित विकास र बसोबास नै हो । त्यसमाथि, बाढी र पहिरो आउने ठाउँ ख्यालै नगरी बसोबास बनाउँदा प्राकृतिक प्रकोपले मानवीय क्षति बढी भएको अर्का एक विज्ञको भनाइ छ । माघ ८, २०७५
५ आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस, आयोगको सदस्यहरुपछि सिफारिस हुने बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिकस्रोत तथा वृत आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । आयोगमा अन्य ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदले अध्यक्षको लागि सिफारिस गरेपनि सदस्यहरुको नाम भने सिफारिस गरेको छैन । आयोगको अध्यक्ष र सदस्इको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । उनीहरु बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन । आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका खान नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । माघ ६, २०७५
हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने केहि प्रमाण भेटियो : डब्ल्यूएचओ
अमेरिकामा एकैदिन ५५ हजार कोरोना संक्रमित थपिए